Al-Shabaab oo weerar qasaare geystay ka geystay degaanno ka tirsan gobolka W/Bari Kenya – Maanta Online
Al-Shabaab oo weerar qasaare geystay ka geystay degaanno ka tirsan gobolka W/Bari Kenya
Wararka naga magaalada Gaarisa ayaa sheegaya in degaanka Dhubow oo ku dhow xadka u dhaxeeya dalalka Kenya iyo Soomaaliya waxaa maanta weerar ka geystay dagaalyahano ka tirsan ururka Al-Shabaab, waxaana jira qasaaro lixaad leh oo soo gaaray halkii uu dagaalka ka dhacay.
Ilaa afar macallim ayay Al-Shabaab ku dileen halkaasi, iyagoo kaxeystay laba kale oo iyana ka tirsanaa maamulka dugsigaasi, waxaana sidoo kale uu ku geeriyooday canug la sheegay inay ku dhacday rasaas wiifto ah.
Wararku waxay intaasi raacinayaan in Al-Shabaab ay gubeen anteeno ay lahayd shirkadda isgaarsiinta Safaricom, iyagoona sidoo kale dab qabadsiiyay goobo waxbarasho oo halkaasi ku yaala.
Ururka Al-Shabaab ayaa kordhiyay dagaalada uu ka wado degaanada gobolka Waqooyi Bari ee ay degaan Soomaali Kenyaatiga, iyagoona toddobaad gudihiisa fuliyay ilaa 5-weerar oo ay ku dileen 25-ruux, kuwaasi oo iyagu jira ciidamada Kenya, kuwo Mareykan ah.
← Askar baxsad ka ah Axmed Madoobe oo dagaal la galay Milateriga DFS
UK Somalis ‘racially profiled’ over FGM →